Cinelerra: echimurenga app yekugadzirisa vhidhiyo paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Chokwadi kare unoziva Cinelerra, asi kana iwe uri mumwe wevashandisi avo vachiri kuvhiringidzika, iwe unofanirwa kuziva kuti mahara software yekugadzirisa vhidhiyo inoshanda pasi peGNU / Linux masystem. Iyo ine kugona kudzokorora mifananidzo uye inobvumidza yakananga kuendesa mpeg, ogg, uye mbishi (mbishi) mafaera, pamwe nemamwe mafomati akajairwa senge avi, mov, nezvimwe.
Iyo inotsigirawo odhiyo kubva Kuvimbika kwakakwirira uye inoshanda neYuva neRGBA nzvimbo dzemavara. Vhidhiyo yakatsigirwa inogona kunge iri chero yekumhanyisa uye saizi, nekuti iri zvachose yakasununguka nesarudzo uye chiyero chemafuremu pasekondi (FPS). Muhwindo rayo rebasa, rinokutendera kuti uite zvese zvakajairika kugadzirisa mabasa nenzira yakapusa.
Cinelerra zvakare ine akawanda maficha echinhu chisina kumanikidzwa zvemukati, kupa, kugadzirwa kwepamusoro resolution, nezvimwe. Asi haisi software yekushandisa kusiri kwehunyanzvi, sezvo iyo pro vagadziri Vanoda zvimwe zvinhu zvakawedzerwa mune iyi software, zvichiita kuti zviome kune vashandisi vasina ruzivo.
Paunomhanya chirongwa ichi, iwe uchaona graphical interface ine akati wandei windows. Imwe yadzo inokutendera kuti utarise mhedzisiro, imwe inoratidza mamwe anonakidza histograms, uye iyo nzvimbo pazasi inoshandiswa kune akasiyana maodhiyo nemifananidzo matraira aunogona kudzoreredza nematurusi asingaverengeki anowanikwa. Mune mamwe mazwi, yakafanana chaizvo nezvinoonekwa mune imwe software yakafanana neiyi.
Kana iwe uchifarira, unogona kuzviedza izvozvi dzakasununguka zvachose. Kunyangwe paine hunyanzvi, haufanire kudyara mari yakawanda mumarezinesi anodhura, semamwe mapurogiramu akasarudzika kune aya iwo ehupfumi. Nekudaro, haisi kuwanikwa munzvimbo yepamutemo repos yezvakawanda zvakakomberedzwa, saka kuiswa kwayo kunoda kurodha pasi iyo DEB package yeUbuntu kana sarudza mamwe mapakeji emamwe marara anowanikwa, uye kunyangwe iyo yepasi AppImage package ...
Mamwe mashoko - Cinelerra webhusaiti yepamutemo
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » Cinelerra: echimurenga app yekugadzirisa vhidhiyo